Amafulethi e-Lemon Tree Corfu - I-Airbnb
Amafulethi e-Lemon Tree Corfu
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Konnect
Amafulethi e-Lemon Tree Corfu atholakala e-Ypsos, endaweni yase-Pirgi.
Isanda kwakhiwa, le ndawo enamafulethi amahlanu, wonke atholakala esitezi sokuqala, anganikeza amaholide antofontofo futhi anokuthula.
Ifulethi ngalinye, liqukethe ikamelo elinemibhede emibili, indlu yokugezela eyodwa enendawo yokulala kanye nendawo evulekile yohlelo lwekhishi nekamelo lokudlela, lapho umbhede olala umuntu oyedwa unombhede owengeziwe, okwenza ifulethi ngalinye likwazi ukubungaza izivakashi ezingaba ngu-4.
Wonke amafulethi anomshini womoya oshisayo nobandayo futhi ahlomele izinto ze-TV. Ikhishi elinesitofu, iketela elisebenza ngogesi kanye nesiqandisi. Igumbi lokugezela liza nobhavu noma ishawa. Ikamelo lokulala linamakhabethe amakhulu.
Ngaphandle, ama-balcony anefenisha, alungele ukujabulela ikhofi lasekuseni futhi uqale usuku oluhle.
Kunikezwa amashidi namathawula ombhede.
I-WIFI iyatholakala kuzo zonke izindawo futhi imahhala.
Ukukhetha okuhle kulabo abafuna amaholide aseduze namasevisi endawo, amabhishi amahle, imizana ebukekayo eba kude ngokwanele ukuba banikeze iholide lokuphumula.
4.71 · 21 okushiwo abanye
Uma kwenzeka udinga okuthile, ungangabazi ukuxhumana nathi. Sihlala sinakho, egameni lokungenisa izihambi kwamaGreki kulo lonke. Zizwe ukhululekile ukusibuza noma yini ucabangela isikhathi sakho seholide ngokukunikeza amathuba amaningi okubuka indawo nempilo yasebusuku kanye nokuphendula noma imiphi imibuzo mayelana nezinto zokuhamba. Ngakho-ke, singathanda ukufaka isandla ngokukunikeza indawo yokuhlala ejabulisayo e-Corfu.
Uma kwenzeka udinga okuthile, ungangabazi ukuxhumana nathi. Sihlala sinakho, egameni lokungenisa izihambi kwamaGreki kulo lonke. Zizwe ukhululekile ukusibuza noma yini ucabangela i…
Inombolo yepholisi: 0829Κ123Κ0623900
Hlola ezinye izinketho ezise- Ypsos namaphethelo